Denmark oo ka laabatay qorshe ay dib ugu soo celin rabtay 1,200 ruux oo Somali ah – STAR FM SOMALIA
Denmark oo ka laabatay qorshe ay dib ugu soo celin rabtay 1,200 ruux oo Somali ah
Dowladda Denmark ayaa waxay ku dhawaaqday inay ka laabatay go’aankii ahaa in dalka dib loogu soo celiyo 1,200 ruux oo Somali ah, kuwaasi oo qaab qaxooti ah u joogay dalkaasi.
War-saxaafadeed ka soo baxay dowladdaasi ayaa lagu shaaciyey in laga laabtey go’aankaasi kadib markii cadaadis badan ay kala kulmeen hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo ururo kale.
Maanta ayaa su’aalo la weydiinayay 400 oo ka mid ah dadkaasi, balse waxaa si lama filaan ah ku soo baxay go’aankan ah in dib looga laabtay dib u celinta dadkaasi.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee dib u soo celintan looga baaqsaday ayaa ah amniga dalka oo aan weli xasilin kadib qaraxyo ka dhacay meello ka mid ah dalka oo caasimadda Muqdisho ugu horreyso.
Dadkii horey loogu sheegay in dib loo soo celinayo ayaa farxad badan dareemay, waxaana qaarkood dadkaasi ay dib uga soo baxeen meelihii ay gambaadka ka dhiganayeen.
Dabayaaqada sanadkii 2016 ayaa dowladda Denmark waxay sheegtay in dalka ay ku soo celin doonto 1,200 oo qaxooti Somaliyed ah kadib markii ay sheegeen in nabad ay tahay magaalooyinkii ay sheegteen inay ka yimaadeen.
Somali badan oo la soo celin rabay ayaa farxad badan dareemay, maadaama aysan ku qanacsaneyn in dalkooda hooyo lagu soo celiyo, ayna doorbideen inay dalkaasi ku noolaadaan.
Ammaanka Muqdisho oo si weyn loo adkeeyay iyo wadooyinka qaar oo la xiray